HEGERLS radio shuttle mumhanyi
HEGERLS radio shuttle inomhanyisa
HEGERLS kutyaira mune anonetsa system
HEGERLS imba yekuchengetera mezzanine racking
HEGERLS masherufu emapallet racking
HEGERLS sundira kumashure racking system
HEGERLS nhare mbozha
HEGERLS Anorema Basa rekuchengetedza
Heavy Duty Simbi Pallet Racking Sisitimu
Industrial Kuchengeta Racks System
Yakakwira-simbi Shuttle Kuchengetedza Sisitimu
Nzvimbo Yekutanga Hebei, China
Nguva yekuendesa 90 Mazuva
Mari yekubhadhara L / C, D / A, T / T, Western Union
Heavy Duty Cantilever Racking System ine technical lateral forklift inogona kugadzirisa kuchengetedza kwezvinhu zvakareba uye zvisina kujairika zvakaumbwa zvinhu. Iyo yepamusoro mbiru inogona kusvika gumi metres, cantilever ruoko kureba ndeye 1.0 - 1.2m, uye kurodha kugona kunogona kusvika 1 tani.
Heavy Duty Cantilever Racking System inogona kushandiswa mukati nekunze. Rinogona kushandiswa inopisa Dip kwakakurudzira kuti pemvura kurapwa panze. Iyo inogona zvakare kuiswa padenga kumusoro kwekoramu, ipapo inogona kuramba mweya, mvura uye kupenya kwezuva.
Cantilever racking inotora yakatarwa uye yakasimba-maoko maoko, akakodzera kuchengetedza akareba akaumbwa, denderedzwa, mahwendefa uye zvisina kujairika zvinorema zvinhu. Zvinoenderana nemutoro wekutakura mutoro, iwo akapatsanurwa kuita akapenya, epakati uye anorema masitaera.
Mushure mekuwedzera simbi kana yemapuranga rukoko bhodhi pamaoko, inonyanya kukodzera diki nzvimbo uye yakaderera kukwirira imba yekuchengetera, ine yakakwira nzvimbo kushandiswa. Zviri nyore chaizvo uye nekukurumidza kurodha uye kuburitsa zvinhu, pamwe nekuona kuri nyore kwezvinhu zvekuchengetedza.
◆ Wide hwakawanda hwemitoro masimba inokodzera zvese zvakajairwa uye kudengenyeka kwekushandisa
◆ Center koramu dhizaini inogadzira isina muganho yakatwasuka nzvimbo
Maoko anogona kugadziriswa zviri nyore kumusoro uye pasi mukoramu uye anowanikwa murefu nemhando dzakasiyana kubva ku220 ~ 1,500 kgs (100 ~ 3,300 lbs).
Ruoko rwecantilever racking inogona kunge iri imwechete kana mativi maviri.
Isu tinopa HEGERLS cantilever racking 2021 yepamusoro mhando 1500kgs ine simba rekunamatira chubhu kana MDF yekuchengetedza. Isu tinozvipira kudura rekuchengetera munda kwemakore makumi maviri neshanu. Tiri kutarisira kuva wako kwenguva refu naye mu China.
HEGERLS cantilever racking 2021 yepamusoro mhando 1500kgs ine simba rekunamatira chubhu kana MDF yekuchengetedza
1.Product sumo cantilever pani
3.Product ficha uye kushandiswa
3.1.Iyo yakakodzera MDF uye chubhu yekuchengetedza. Kuiswa kwese ruoko kunogona kusvika 1000kgs
3.2 kukwirira kwepositi kunogona kusvika 10m kukwirira
4.Production udzamu cantilever pani
4.1 Ruvara runogona kuvezwa. Tine ruvara rwebhuruu neorenji. Izvo zvinogona zvakare kuve zvakagadziriswa.
4.2 maburi anoumbwa nekucheka laser. Ndizvozvo chaizvo
5.1 isu takapasa chitupa cheSGS.BV, TUV uye ISO yepamusoro yekudzora chitupa.
Uyezve, isu takapasa gwaro rekuchengetedzwa kwenzvimbo, hutano uye chengetedzo manejimendi
5.2 Mbishi zvigadzirwa: inotonhora yakakungurutswa simbi Q235B. kana epasi rose simbi standard SS400
5.3. rolling muchina. Tine gumi nemaviri seti rolling mutsetse, inogona kumonera akasiyana saizi.
5.4 Simba rekuvhara mutsara. Iyo yakareba mazana mashanu emamirimita uye iyo mhando yesimba yekupfeka pfuti ndeye GEMA, iri inozivikanwa kwazvo pamunda wekumhara.
5.5 mutengi anoshanyira. Nzvimbo yedu iri mudunhu rehebei, padhuze neBeijing neTianjin. Yedu yendege zita iri Shijiazhuang zhengding yepasi rese airport. Gamuchira kushanya kwako chero nguva.
5.6 kuratidzira. Gore rega rega isu tichaenda kuCanton fair uye shanghai Cemat yakanaka.
6 Dhirivhari. Kutumira uye sevhisi
6.1 mumapepa uye kutumirwa. Kazhinji, iwo akatwasuka anozoiswa nemapurasitiki mafomu. Uye shuttle racking ichaiswa mumatanda pallets.
6.2 Isu tinopa dhizaini dhizaini uye 3d mhedzisiro pikicha
Mubvunzo: Ndeipi garandi yemhando yezvigadzirwa zvako?
A: Yedu yemhando garandi ndeye 1 makore. Ticharamba tichipa sevhisi kubva panguva ino uye chete kupa mutengo wezvipenga zvikamu.
Mubvunzo: Ndeipi nguva yekutungamira?
A: Kune anonetsa system, inowanzo tora mazuva makumi matatu. Uye kune shuttle racking, inoda mazuva makumi matanhatu ekugadzirwa.
Mubvunzo: Unogona here kupa dhizaini dhizaini?
A: Ehe, isu tinogona kupa dhizaini dhizaini zvakasununguka muAutocad kana 3d mufananidzo. Ndiro basa redu remahara.
Mubvunzo: Ndeupi muto kutonhora unowanikwa?
A: Kazhinji, isu tine ruvara rwebhuruu RAL5005 uye orenji RAL2004. Ruvara rungagonewo kugadziridzwa. Ndapota tipei nhamba yako yemuvara.
Q: sei nezvekugadza?
A: Isu tinopa yakadzama yekuisa yekudhirowa. Kune yakapusa echinyakare racking, vashandi vanogona kuiisa zvinoenderana nekudhirowa kwedu. Kana kuti zvisizvo, mainjiniya edu aigona kuenda panzvimbo kuti arayire kuisirwa Uye mutengi achabhadhara mutengo.
Iwo epakati midziyo ye otomatiki imba yekuchengetera-stacker
Yakateedzerwa nzira yekukanda crane ndeye yakakosha kireni yakagadzirwa nechitarisiko chetatu-mativi imba yekuchengetera, inonzi stacker, yakakosha kusimudza uye kubata michina mune matatu-mativi imba yekuchengetera, uye chiratidzo chehunhu hwehunhu hwevatatu. -dimensional imba yekuchengetera. Chinangwa chayo chikuru ndechekumhanya munzira, mumugwagwa wedura repamusoro-soro yekuchengetera zvinhu pamusuwo wemugwagwa unopinda mukamuri yemitoro; kana kutora zvinhu zviri mukamuri rinotakura zvinhu nekuzvitakura kuenda kumusuwo wenzira kuti upedze basa rekuchengetedza.
Kune akawanda marudzi emastacker cranes. Mune ezvazvino matatu-mativi ekuchengetera mafomu, akajairika ari
1. Zvinoenderana nechimiro, chakakamurwa kuita imwechete yekoramu dhizaini uye yakapetwa kaviri kodhi
2. Zvinoenderana neyekumhanya track rondedzero, iyo yakakamurwa kuita mutsara uye mhando yakakombama
Parizvino, mumatura matatu emunyika mangu, masiteki anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri senge kugadzira michina, kugadzira mota, indasitiri yemachira, njanji, midzanga uye mishonga. Nebudiriro yezvigadzirwa zvemazuva ano zveindasitiri, tekinoroji yeinotevedzwa yemugwagwa stacker cranes iri kuramba ichivandudza nekukwenenzvera. Kubva 2017, Hegerls akawana iyo nyowani chimiro uye nyowani basa stacker patent. Yakaenderera muchidimbu chiitiko uye yakazvipira mukusimudzira nekuita. Isu tanga takakomba kwazvo nezvekuvaka imba-matatu yekuchengetera yezvigadzirwa zvitsva nekuchengetedza uye chengetedzo!
Pashure: HEGERLS kutyaira mune anonetsa system
Zvadaro: HEGERLS radio shuttle inomhanyisa
Simbi Cantilever Rack
Chikamu 1118, Kuvaka Nha. 6, Tatan Mall, Tatong Street, Shijiazhuang, China
Kugadzira chigadziko: 68 Shidai Road, Xinhe Industrial Park, Hebei Province, China.